ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ပိုပို – Shwe Sar
ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ပိုပို
ရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော်မလေး ပိုပိုကတော့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေ များစွာ ထွက်ရှိထားပြီး လက်ရှိမှာလည်း သီချင်းေ လးေ တွ ဆက်တို က်လု ပ်ဆောင် နေပါတယ်နော်..။သီချင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးစပ်ကာ အသံချိုချိုလေးနဲ့ ဖျော်ဖြေတတ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ပရိသတ်တွေကို အချစ် ပိုစေ သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း မကြာခဏဆော့ကစားတတ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲမျှဝေလေ့ရှိသလို အခုတစ်ခါမှာလည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာ Tik Tok Videoလေးကို ဝေမျှထားပါသေးတယ်နော်..။သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို အုမဲမျှဝေတတ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း အထာကျကျ အမိုက်စားလေး ဓာတ် ဖမ်း ထားတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။
“Red. .” ဆိုပြီး သူမရဧ့ ညို့အားပြင်းအမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပိုပိုက ချစ်ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း သဘောကျနေကြမှာပါနော်..။တက်ကြွမှုတွေနဲ့ အမြဲလန်းဆန်းနေပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်လေး ပိုပိုကိုတော့ မချစ်ဘဲ မနေနိုင်အောင် အချစ်ပိုနေကြမှာမို့ အသည်းလေးတွေ ပေးသွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်..။
ရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော အဆိုတျော မလေး ပိုပိုကတော့ ပရိသတျတှအေကွိုကျတှစေ့တေဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှေ မြားစှာ ထှကျရှိထားပွီး လကျရှိမှာလညျး သီခငျြးေ လးေ တှ ဆကျ တို ကျလု ပျဆောငျ နပေါ တယျနျော..။သီခငျြးလေး တှကေို ကိုယျတိုငျဖနျတီးရေးစပျကာ အသံခြိုခြိုလေးနဲ့ ဖြျောဖွတေတျတဲ့ ပိုပိုကတော့ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာလညျး ပရိသတျ တှေ ကို အခဈြ ပိုစေ သူလေးလညျး ဖွဈပါတယျနျော..။
Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတှကေိုလညျး မကွာခဏဆော့ကစားတတျတဲ့ ပိုပိုကတော့ ပရိသတျတှအေတှကျ အမွဲမြှဝလေရှေိ့သလို အခုတဈခါမှာလညျး သူမရဲ့ ခဈြစရာ Tik Tok Videoလေးကို ဝမြှေထားပါသေးတယျနျော..။သူမရဲ့လှုပျရှားမှုလေးတှနေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို အုမဲမြှဝတေတျတဲ့ ပိုပိုကတော့ အခုတဈခါမှာလညျး အထာကကြ အမိုကျစားလေး ဓာတျ ဖမျး ထားတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဖမျးစားလိုကျပွနျပါတယျနျော..။
“Red. .” ဆိုပွီး သူမရဧ့ ညို့အားပွငျးအမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပိုပိုက ခဈြပရိသတျတှကေို ဝမြှေထားတာဖွဈပွီး ပရိသတျတှလေညျး သဘောကနြကွေမှာပါနျော..။တကျကွှမှုတှနေဲ့ အမွဲလနျးဆနျးနပွေီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျောလေး ပိုပိုကိုတော့ မခဈြဘဲ မနနေိုငျအောငျ အခဈြပိုနကွေမှာမို့ အသညျးလေးတှေ ပေးသှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့ဦးနျော..။
Previous post အသည်းယားစရာ အမူအရာလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိဆော့ထား တဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဗီဒီယို
Next post ၂၀၂၁ ဧပြီလ ရောက်ရင် မြန်မာပြည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မယ် ဆိုတာ တကယ်လား? (ကာကွယ်ဆေးတွေ ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ)